हामी कति धेरै गलत भयौं
अधिवक्ता गंगा दहाल--
गंगा दहाल– २०७७ साल पुस ५ गते जनतालाई जिल्लाराम पार्ने दुई घटना एकैसाथ घटेका छन् ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । अविश्वासको प्रस्तावको बिपक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिदिए । सरकारले पठाएको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले मञ्जुरी दिन कत्ति बेर लगाइनन् ।
यी दुबै कार्य नेकपाभित्रको अन्तर संघर्षको प्रतिफल थियो । लामो समयदेखि पार्टीका दुई पाइलट केपी ओली र प्रचण्डवीच गुटबाजी चलिरहेको थियो । दुबै पक्ष एकदोस्राप्रति असह्य आरोप लगाइरहेका थिए । अन्ततः सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले १९ बुँदे अभियोगपत्र दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ३८ बुँदे झन ठूलो आरोपपत्र दर्ता गराइदिए । नेकपाको इतिहासमा यी दुबै प्रस्ताव फिर्ता भएनन् र पार्टीको सम्पत्तिको रुपमा रहेको छ । यो सम्पत्ति नेकपामा लाग्ने कुनै पनि सदस्यका लागि भोलिका दिनमा स्मरण गर्ने कलंकपत्रसमेत हुनेछ ।
यही दुई प्रस्तावले दुई अध्यक्षलाई एउटै पार्टीको दुई किनारा बनायो । एउटाले अविश्वास गर्दा अर्कोले मध्यावधिको चुनाव नै घोषणा गरिदियो ।
समाजमा, राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा ठूलै तरङ्ग फैलिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नेकपा नेतृत्वको सरकारको निर्णय संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित छ । अर्कोथरि भन्छ– आफ्नै शक्तिशाली पार्टीको सरकारलाई काम गर्न नदिनु नेताहरुको भयानक भूल हो ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा– नेकपाभित्रको आन्तरिक बिबाद र बिग्रहका कारण, गुट र फुटका कारण, व्यक्तित्व टकराव र सत्तालोलुपताका कारणले गर्दा एकातिर भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, नेकपा भ्रष्टाचारी पार्टी साबित भयो भने लोकतन्त्र चलाउन नसक्ने असक्षम पार्टीका रुपमा पनि दर्ज हुनपुग्यो । अव बढ्ने अस्थिरता र अराजकताको भूमरीले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्न सकिदैन । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा क्षति भयो, त्योभन्दा ठूलो क्षति नेकपाको बिगत, बर्तमान र भविष्यका लागिसमेत हुनपुगेको छ । कल्पना गरौं, आगामी निर्वाचनमा जनताका सामुन्ने अव के भनेर भोट माँग्न जाने ? हामीसँग त्यो नैतिक बल गुमेको अवस्था छ, गुमाएका हाम्रा अगुवा नेताहरुले नै हो । कोही पनि यो जिम्मेवारीबाट अछुत छैन । ठूला नेताहरुले गर्नुसम्मको गल्ती गरेका छन् ।
जनआन्दोलन गलत कि हामी ? जनादेश दिने जनता गलत कि हामी ? यो प्रश्नमा प्रत्येक नेताले मनन गर्नैपर्छ र सबै नेपाली अटाउने संरचनाका लागि चिन्तन मनन गरेर अघि बढ्नैपर्छ । गल्ती भइसक्यो, सबैले सच्चिनैपर्छ ।